Olee otú Play MOV Files (QuickTime) on Android ekwentị mkpanaaka na
> Resource> Android> Olee otú iji Play MOV Files (QuickTime) on Android ekwentị mkpanaaka na
Ke ofụri ofụri, Android anaghị akwado MOV (QuickTime) faịlụ. Ya mere, iji na-egwu ha na gam akporo igwe, ị ga-mkpa iji tọghata MOV ka Android dakọtara video formats, ma ọ bụ jiri Android mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enyere ndị playback nke ihe osisi formats. Ke ibuotikọ emi, ị ga-amụta otú na-egwu MOV (QuickTime) faịlụ na gam akporo igwe iji ma nke abụọ a ụzọ.
Method 1: tọghata MOV (QuickTime) faịlụ ndị ọzọ formats
Usoro 2: Play MOV (QuickTime) faịlụ na Android mgbasa ozi ọkpụkpọ
Ka mfe egwu MOV faịlụ na android ntị, gị mkpa ibudata a ọkachamara Android video converter- Wondershare Video Ntụgharị. Na ya, converting na MOV faịlụ ka Android ekwentị dị nnọọ mfe, na i nwere ike na-enwe gị vidiyo na Android ekwentị na ọ laa. Ugbu a, ka anyị hụ otú iji ya.
1 Tinye MOV faịlụ ka Ntụgharị
Wụnye na-agba ọsọ a software. Pịa "Tinye Files" button ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ-n-dobe MOV faịlụ ka usoro ihe omume.
2 Set mmepụta format
Isi ihe na-egwu MOV on gam akporo igwe bụ ịhọrọ ezi na kwesịrị ekwesị mmepụta usoro. Video Ntụgharị bụ ebe a iji nye aka. Mgbe agbakwunye MOV faịlụ, pịa "Format" na akara ngosi na "mmepụta Format" taabụ, na mgbe ịgbanwee gaa na "Ngwaọrụ" udi. Ebe i nwere ike na-fọrọ nke nta niile Android ekwentị ụdị site na listi. Họrọ otu dị ka gị mkpa.
3 Malite akakabarede usoro
See "tọghata" button. Mgbe ahụ, a video Ntụgharị ga-ntabi-amalite akakabarede usoro na ọganihu mmanya ga-egosi gị oge fọdụrụ. Mgbe ọtụtụ sekọnd, ị na-mere!
Ọ bụrụ na achọghị iji tọghata MOV faịlụ, ị nwere ike ozugbo-egwu faịlụ gị Android ekwentị n'iji ike na free Android mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka Wondershare Player maka Android. Nke a Android mgbasa ozi ọkpụkpọ akwado iche iche video formats dị ka FLV, MKV, AVI, ROMB, MP4, MOV na ndị ọzọ. E wezụga, i nwekwara ike iji ya na-ekiri na vidiyo si na ndị kasị ewu ewu ntụrụndụ saịtị, dị ka YouTube, Vevo, Matecafe, Vimeo, wdg ..-a n'ọnụ n'okpuru na-ahụ otú na-egwu MOV faịlụ na ya.
Nzọụkwụ 1 Download na wụnye a Android mgbasa ozi ọkpụkpọ
Ugbu a dị nnọọ pịa download buttons n'elu ma ibudata APK ma ọ bụ ala si Google Play. Wee wụnye ya na ekwentị gị.
Nzọụkwụ 2 agafeta MOV faịlụ ka ekwentị
Jikọọ gị android na ekwentị na kọmputa. Mepee ụzọ kpọmkwem maka MOV faịlụ, na nyefee ya na ekwentị. Mgbe ahụ na-amalite Wondershare Player maka Android na-egwu ya.
Olee otú Play MP4 faịlụ na Android ekwentị mkpanaaka na
Otú nyefee Music si Samsung ka Samsung
Top 5 Android Nchekwa Manager ngwa Free Up Android Space Mfe
Ụzọ dị mfe iji Igosi Samsung Galaxy Cheta Data Recovery